अन्तर्राष्ट्रिय विवाह प्रक्रिया समर्थन स्टाफ / कार्यालय को परिचय | अन्तर्राष्ट्रिय विवाह / चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, इत्यादि को लागी Spousal भिसा अधिग्रहण एजेन्सी केन्द्र।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय विवाह प्रक्रियाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विवाह पछि जापानमा बस्न पति / पत्नी भिसा प्राप्ति प्रक्रियामा १०० भन्दा बढी परामर्शको साथ सहयोग गर्दछौं। कृपया हामीलाई अनधिकृत मामिलाहरूको लागि छोड्नुहोस् जुन अन्यत्र सम्हाल्न गाह्रो छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विवाह / चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, इत्यादि को लागी Spousal भिसा अधिग्रहण एजेन्सी केन्द्र।
कार्यालय / कर्मचारी
अन्तर्राष्ट्रिय विवाह / चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, इत्यादि को लागी Spousal भिसा अधिग्रहण एजेन्सी केन्द्र। TOP
अन्तर्राष्ट्रिय विवाह प्रक्रिया समर्थन स्टाफ / कार्यालय को परिचय
तल हाम्रो स्टाफ र हाम्रो कार्यालयको एक सिंहावलोकन हो, जसले तपाईंलाई विवाह र जापानमा छिटो भन्दा चाँडो बाँच्ने तपाईंको सपना साकार गर्न मद्दत गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछ।
भिसा आवेदन सहायता कर्मचारीहरु इमिग्रेशन ब्यूरो को लागी
प्रतिनिधि, विशिष्ट प्रशासनिक लेखक योशिटोमो नोमुरा
सन् १22२ मा ऐची, जापानमा जन्म।
जब म एक कानुनी सल्लाह आफैलाई प्रयोगकर्ताको रूपमा प्रयोग गर्थें, म खराब मनोवृत्ति, खराब प्रतिक्रिया, र दोहोर्याइएको गाह्रो कार्यक्षेत्रप्रति असहजताबाट चकित भएँ। मलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो साथी खराब छ, त्यसैले मैले कसैसँग सल्लाह लिएँ, तर त्यहाँ कुनै ठूलो भिन्नता थिएन। , र पछि मैले यो थाहा पाए कि कानूनी सल्लाहको पेशा सेवा उद्योगमा एकदम कम जागरूकता थियो। मैले त्यस्तै गुनासो र चिन्ता भएका व्यक्तिहरूको संख्या घटाउन अफिस खोल्ने निर्णय गरें।
विभिन्न चिन्ताहरू समाधान गर्न, म विश्वास गर्छु कि कानुनी ज्ञान हुनुका साथै व्यापक सामाजिक अनुभव हुनु पनि आवश्यक छ। यस कारणले गर्दा मैले एक कर्मचारी कम्पनीको शाखा प्रबन्धक, गोदाम व्यवस्थापन र ट्रक चालकको लागि अनुभव गरें। वितरण, आवासको लागि एक रियल इस्टेट कम्पनीको आवास र भवन लेनदेन प्रबन्धक, र न्यायिक सचिवालयको कार्यालय, जुन हालको कामसँग जोडिएको छ।
हाम्रो अफिसमा हामी त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सधैं सक्दो कोसिस गर्छौं जसले तपाईंलाई परामर्श लिन सजिलो बनाउँदछ, अरूबाट चाँडो प्रतिक्रिया दिनुहोस्, तपाईं हामी नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईंको लागि सजिलो वर्णन गर्नुहोस्, र हामी तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्दो कोसिस गर्छौं। सकेसम्म चाँडो।कृपया मलाई समस्यामा छ भने स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
हाकाता शाखा प्रबन्धक, प्रशासनिक लेखक योशिरो इकेदा
१333 मा जापानको हिरोशिमामा जन्म।
मेरो हालको कानूनी समर्थन कार्य भन्दा पहिले मैले सेवा, परामर्श, र ग्राफिक डिजाइन उत्पादन जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू अनुभव गरेका छन्। त्यसकारण, मलाई लाग्छ कि हामी असभ्य शब्दहरू र कार्यहरू बोल्न सक्षम हुनु हुँदैन जुन यस उद्योगमा सामान्य छ र प्राविधिक सर्तहरू जुन सामान्य जनतालाई बुझ्न गाह्रो छ। ग्राहकको दृष्टिकोणबाट, हामी हाम्रो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरू प्रस्ताव गर्दछौं र सकेसम्म छिटो मनको शान्ति सुनिश्चित गर्न यथाशक्य गर्छौं।
तपाईं हामीलाई धेरै चिन्ताहरू हुन सक्छ जब तपाईं पहिले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो।
जहाँसम्म, तपाईंलाई आधार थाहा छैन, हामी तपाईंलाई आफ्नो कुरा बुझाउन के गर्ने भनेर सोच्दैछौं, कुराकानी गर्न सजिलो वातावरण र द्रुत प्रतिक्रियाको साथ वातावरण सिर्जना गर्न। हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
प्रशासनिक Scrivener Kenji Sengoku
सन् १4.4 मा चिबा, जापानमा जन्म।
कलेजबाट स्नातक गरेपछि, मैले आतिथ्य उद्योग र टेलीकम्युनिकेसन सम्बन्धी रोजगारहरू मार्फत प्रशासनिक लेखकको काम फेला पारे। मेरो नियमित काममा काम गर्दा, म अस्पष्ट सरकारी गाईडहरू पढ्छु र प्रक्रियाहरूका मित्रैलो स्पष्टीकरणहरू सुन्छु। यो गर्न कत्ति गाह्रो छ मैले अनुभव गरें। म प्रशासनिक कानून क्लर्क बन्न सकें किनकि उनले मलाई सरल भाषामा समझाए र कठिन प्रक्रियालाई छिटो बनाए। हामी पेशेवरहरूको आवश्यकता ’bout राम्ररी सचेत छौं जसले विश्वसनिय रूपमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछन्।
यो सहज रूपमा अगाडि बढ्नको लागि कुरा हो, तर हाम्रो ग्राहकहरूको चिन्ताको समाधान प्रदान गर्नका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ र म कसरी प्रक्रिया र आवश्यक कागजातहरू बुझाउने तरिका बुझाउने छ ताकि बुझ्न सजिलो छ।
यदि तपाईंलाई प्रक्रियाको साथ समस्या छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, चाहे यो मामूली पनि हो। म तपाईंसँग मेरो सम्बन्धको कदर गर्न चाहन्छु, त्यसैले कृपया मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
प्रशासनिक लेखक काजुया हिरोज
जापान मा 1977 मा जन्म।
के तपाईंलाई कहिल्यै कागजातहरू तयार गर्न वा सरकारी कार्यालयमा कागजातहरू प्रस्तुत गर्न समस्या भएको छ?
मेरो साथी ती मध्ये एक थियो। उनी जापानमा विवाह र बस्नका लागि जटिल प्रक्रियाहरूबाट परेशान थिए। उसलाई मद्दत गर्ने व्यक्ति एक प्रशासकीय लेखक थिए। जब मैले यो कथा सुने, मैले बुझें कि त्यहाँ यस्तो प्रकारको काम छ जुन मसँग सम्बन्धित छ र तिनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछु, एक प्रकारको पर्दा पछाडि समर्थन, र यही कारणले मैले प्रशासकीय लेखक बन्ने निर्णय गरे।
म १० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि ग्राहक सेवा उद्योगमा मेरो अनुभव प्रयोग गर्न चाहन्छु, र म आफ्ना ग्राहकहरूलाई खुशी पार्न सक्दो प्रयास गर्न चाहन्छु।
म ग्राहकको समस्यामा सहयोग पुर्‍याउँछु ताकि म धेरै ग्राहकहरूको मुस्कान भेट्न सक्दछु। हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
प्रशासनिक लेखक Shotaro ईशिजाकी
टोक्यो, जापानमा फेब्रुअरी १ ​1995 in मा जन्म
मेरो हालको जागिर लिनु अघि मैले न्यायिक स्क्रिनर कर्पोरेशनका लागि काम गरें। मलाई विश्वास छ कि त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जुन कानुनी प्रक्रियाद्वारा भ्रमित छन् जुन उनीहरूसँग सामान्यतया परिचित हुँदैनन्।
मेरो अघिल्लो काममा मेरो अनुभव बाट, म आफ्नो ग्राहकहरु संग काम गर्न को लागी चिन्ताहरु र प्रश्नहरु लाई हटाउन को लागी सक्षम छ। मैले त्यसो गर्नुको महत्त्व सिकेको छु। म ग्राहकलाई प्रशासनिक लेखकको रूपमा विस्तृत सहयोग पुर्‍याउन चाहन्छ, न कि दर्ता सम्बन्धी ब्यवसायमा। त्यसैले म Ai-Support सामान्य कानूनी कार्यालय मा सामेल भए किनकि म त्यसो गर्न सक्षम हुन चाहान्छु।
“सार्वजनिक कार्यालयहरूमा कागजातहरू तयार गर्ने र बुझाउने” वर्णन गर्न सजिलो छ, तर वास्तविकतामा, यो समावेश कानूनको कारण यसलाई बुझ्न सधैं जटिल हुन्छ। यदि तपाईंसँग प्रक्रियाहरू ’bout कुनै चिन्ता वा चिन्ता छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी गाह्रो शब्दावली प्रयोगबाट बच्नको लागि सक्दो प्रयास गर्नेछौं र तपाईंको ग्राहकलाई तपाईंको सन्तुष्टिसहित प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत गर्नेछौं। हाम्रा सबै कर्मचारीहरूले तपाईलाई मद्दत गर्न यथाशक्य गर्नेछन्, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
प्रशासनिक लेखक मेगुमी होंडा
सन् १3.3 मा जापानको चिबामा जन्म।
मेरा आमा बुबा दुवै निजी व्यवसाय मा थिए।
जब म जवान थिएँ, म स्कूलबाट घर फर्कंदा आमालाई कसरी याद गरें भनेर गुनासो गर्थें, किनकि उहाँ घर हुनुहुन्न।
हुन सक्छ यो ’cause म यस्तो प्रकारको वातावरणमा हुर्केको थिएँ कि मलाई लाग्यो कि मेरो स्वरोजगार कडा परिश्रम थियो।
जहाँसम्म, मैले एकल प्रोप्राइटरको रूपमा मेरो आफ्नै सफाई व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरें।
एकपटक मैले वास्तवमै पसल चलाउन थाल्दा, मैले जनशक्ति खोज्नुपर्थ्यो, आयकर रिटर्न फाइल गर्नुपर्‍यो, र यस्तै अन्य सबै दिनहुँ काम गर्ने व्यवसायमा, जुन धेरै गाह्रो थियो।
त्यस समयमा, यो एक प्रशासकीय लेखक थिए जो प्रक्रियाहरूमा परामर्श प्रदान गर्ने जिम्मामा थिए।
यो पछि मलाई प्रशासकीय लेखक बन्नको लागि उत्प्रेरक हो।
मलाई थाहा छ मानिसहरू जो मसँग सल्लाहका लागि आउँदछन् उनीहरूको बिभिन्न भावना हुन्छ।
के तपाइँले कहिले कुनै सुरु गर्ने निर्णय गरेको बेलामा कुनै कठिनाई भएको छ?
हामी हाम्रा ग्राहकहरूको समस्याहरूको लागि उत्तम सम्भव समाधान प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
कृपया तपाईको कुनै विचारहरु संग हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
योग्य प्रशासकीय लेखक मकिको ओकाकावा
जन्म १ 197 55 मा होक्काइडो, जापानमा। कलेजमा छँदा एक प्रशासकीय लेखकको रूपमा योग्य
विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेपछि मैले सप्पोरोको टिभी स्टेशनमा सूचना कार्यक्रम निर्देशकको रूपमा करिब years वर्ष काम गरें।
मैले सिकेको छु कि कार्यक्रमलाई कसरी अझ बुझ्न योग्य र यादगार बनाउन सजिलो समय सीमा अन्तर्गत, र कसरी चालक दलको समन्वय गर्न यसलाई हावामा प्राप्त गर्नका लागि।
म रेस्टुराँका मालिकहरू र शेफहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जनसम्बन्ध विभागहरू, सरकारी कार्यालयहरू, र प्रहरीलगायत बिभिन्न किसिमका व्यवसायहरूको जिम्मेवार थिए।
मेरो अघिल्लो काम र मेरो प्रशासकीय लेखकको रूपमा काम एकदम फरक देखिन्छ, तर मलाई लाग्छ कि तिनीहरू वास्तवमै धेरै समान छन्। म मेरा ग्राहकहरूलाई राम्ररी चिन्न, उनीहरूका अनुरोधहरू सुन्न, र मलाई लाग्ने विधि छनौट गर्नुहोस् जुन उनीहरूको लागि उत्तम हो। यस अर्थमा मलाई लाग्छ कि मेरो विगतको अनुभव अत्यन्त उपयोगी छ।
प्रशासनिक लेखकको रूपमा मेरो काममा, मैले जीवनको महत्त्वपूर्ण परिस्थितिहरूमा उपस्थित हुनु आवश्यक छ। म ध्यान दिएर तपाईं सुन्नेछु र सही र निष्कपट हुन मेरो सक्दो प्रयास गर्ने प्रयास गर्नेछु, कृपया गर्नुहोस्! तपाईको समर्थनका लागि धन्यबाद।
प्रशासकीय लेखक सहायक, ग्राहक चार्ज नामिमोटो मयु
जब तपाइँ कसैसँग तपाइँको समस्याहरूको ’boutमा कुरा गर्न चाहानुहुन्छ, कोसँग कुरा गर्ने भनेर तपाइँलाई थाहा नहुन सक्छ, र तपाइँ मध्ये कसैलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ।
हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि Ai-Support सामान्य कानूनी कार्यालय लाई सम्पर्क गर्नुहोस् जब तपाईंलाई प्रक्रियागत मामिलाहरू र कागजात तयारीको लागि मद्दत चाहिन्छ।
किनकि हामी व्यापक नेटवर्कको साथ कर्पोरेट संगठन हो, प्राय: जसो समस्याहरू हाम्रो कार्यालयमा समाधान गर्न सकिँदैन अन्य व्यवसायिकहरूको सन्दर्भमा भरोसा गर्न सकिन्छ जुन भरोसा गर्न सकिन्छ।
थप रूपमा, हामी कुरा गर्न सजिलो वातावरण सिर्जनामा ​​ठूलो महत्त्व राख्छौं, जुन प्रशासकिय पदाधिकारीको कार्यालयका लागि असामान्य हो। हामीसँग हल्का र सहानुभूतिपूर्वक परामर्शहरू प्राप्त गर्ने प्रणाली छ। तसर्थ, पहिलो पटक आगन्तुकहरु डराउनु पर्दैन।
म सुनिश्चित गर्दछु कि हाम्रो ग्राहकहरू कुनै पनि कुरा सुन्न सक्षम छन् जुन उनीहरूलाई समस्या भइरहेको छ वा जसको ’boutमा प्रश्नहरू छन्। हाम्रो कर्मचारीहरु दिन र रात कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिले, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
सामान्य मामिलाहरू, प्रशासनिक लेखक सहायक, ग्राहक शुल्क यमनका
मेरो बच्चालाई जन्म दिएर हुर्काएपछि, म २०० Ai-Support सामान्य कानूनी कार्यालय मा एकाउन्टेन्ट र प्रशासकीय स्क्रिभेनरको सहयोगीको रूपमा XXXX मा सामेल भएँ, र म आज यहाँ छु।
’cause हाम्रा धेरै ग्राहकहरूले प्रक्रियाहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्दछ जुन उनीहरूको जीवनकालमा एक पटक हुन सक्छ वा हुन सक्दैन, म विश्वास गर्दछु कि परामर्शका लागि हामीलाई आएका धेरैजसो चिन्तित र व्याकुल हुन्छन्।
तसर्थ, हामी हाम्रो कार्यालयमा सम्पूर्ण रूपमा के गर्न प्रयास गर्दछौं हाम्रो ग्राहकहरूको चिन्ता र तनाव कम गर्ने, ताकि तिनीहरू हामीसँग परामर्श गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्दछन्। हामी त्यस्तो वातावरण बनाउँदछौं जुन गर्न सजिलो छ। थप रूपमा, हामी प्राविधिक सर्तहरू प्रयोग गर्नबाट जोगिन र सजिलैसँग बुझ्नको लागि स्पष्टीकरणहरू प्रदान गर्दछौं जुन कुनै पूर्व शर्त ज्ञान बिना नै बुझ्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ कि यस कार्यालयको अर्को विशेषता यो हो कि सम्पूर्ण कार्यालयले नियमित रूपमा प्रशिक्षण सत्रहरू आयोजना गर्दछ ताकि हामी सक्दछौं हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं।
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्, किनकि हाम्रा कर्मचारीहरू र हाम्रो प्रशासकीय प्रशासकले तपाईंलाई हामीसँग परामर्श लिने र प्रक्रिया अनुरोध गर्ने ’bout राम्रो महसुस गराउन हर प्रयास गर्नेछन्।
हामी बुझ्दछौं कि तपाईले अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईले यस अघि कहिले पनि केहि नगर्नु भएको छ, जस्तै तपाईलाई अपरिचित कागजात भर्न आवश्यक छ वा जब तपाईलाई कुनै जटिल अनुप्रयोग पूरा गर्न भनियो।
त्यस्ता अवस्थाहरूमा म सँधै त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दछु जहाँ तपाईं स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको प्रश्नहरू र सरोकारहरू’bout मसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं र इन्चार्जको बीचमा सहज संवाद प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, साथै पूरक समर्थन, ताकि तपाईं सक्नुहुन्छ सहज महसुस।
म मेरो ग्राहकहरु को सेवा को लागी सक्दो गर्छु।
कार्यालयको नाम Ai-Support सामान्य कानूनी कार्यालय (प्रमाणित प्रशासनिक प्रक्रिया कानूनी विशेषज्ञहरु)
स्थापना गर्दै अगस्त २००
ईतिहास जुन २०११ एक निजी कार्यालय शामिल
अप्रिल २०१ Hak हाकाता शाखा फुकुओका, जापानमा हकाटा स्टेशनको अगाडि खोलियो
सम्बद्धता जापान प्रशासनिक Scrivener संघ फेडरेशन, चिबा प्रशासनिक Scrivener संघ, फुकुओका प्रशासनिक Scrivener संघ
कर्पोरेट नम्बर 1102001
प्रतिनिधि योशिटोमो नोमुरा
स्थान 【काशिवा मुख्य कार्यालय】
〒277-0842 सुजुकी बिल्डिंग4एफ, -1-१ सुहेरो-चो, काशिवा-शि, चिबा
〒 812-0012 No.13 Taihei बिल्डिंग १०F, -11-११ हाकाटाकी Chuo-gai, Hakata-ku, फुकुओका शहर, फुकुओका
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस इ-मेल ： info△ai-support.biz（△→@）
व्यापार घण्टा :: ०-18-१-18: ०० (चाहे यो व्यापार घण्टा भन्दा बाहिर छ, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं यदि तपाईं हामीलाई पहिले नै सम्पर्क गर्नुभयो भने।)
छुट्टी शनिबार, आइतवार र छुट्टिहरू (यदि यो बन्द दिन हो भने पनि, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं यदि तपाईं हामीलाई अग्रिम सम्पर्क गर्नुभयो।)
वारेन्टी यदि हाम्रो कार्यालय द्वारा उत्पादित कागजातहरू अधूरो छन् वा यदि हामी सेवाको कुनै पनि ठूलो अंश प्रदर्शन गर्न असमर्थ छौं भने, हामी त्यसलाई पुन: सिर्जना गर्नेछौं वा तपाईंलाई पूर्ण फिर्ती फिर्ता दिनेछौं।
देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको लागि विवाह प्रक्रिया
चिनियाँ नागरिकहरु संग अन्तर्राष्ट्रिय विवाह प्रक्रियाहरु
मकाउ व्यक्तिहरूसँग विवाह प्रक्रिया
भियतनामीसँग विवाह प्रक्रिया
फिलिपिन्सको साथ अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको लागि प्रक्रिया
थाई संग विवाह सम्म प्रवाह
एक सिंगापुरको साथ विवाहको लागि प्रक्रिया
मलेशियन संग विवाह प्रक्रिया
कसरी एक इन्डोनेसियाली नागरिक विवाह गर्न
नेपालीसँग विवाह प्रक्रिया
एक भारतीय नागरिक संग विवाहको लागि प्रक्रिया
श्रीलंकासँग विवाह प्रक्रिया
म्यानमारका मानिसहरूसँग विवाह प्रक्रिया
ताइवान नागरिकहरु संग अन्तर्राष्ट्रिय विवाह प्रक्रियाहरु
कोरियालीहरु संग अन्तर्राष्ट्रिय विवाह विधि
रूसी नागरिकहरूसँग विवाह प्रक्रिया
ब्राजीलियनहरु संग विवाह प्रक्रिया
मोल्दोभन्ससँग विवाह प्रक्रियाको प्रवाह
एक अमेरिकी विवाह गर्ने प्रक्रिया
टर्कीसँग विवाह प्रक्रिया
ईरानीसँग विवाह गर्ने प्रक्रिया
एक इजरायली संग विवाह प्रक्रिया
बल्गेरियालीसँग विवाह प्रक्रिया
देश द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रिय विवाह को लागी आवश्यकताहरु
अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको ’boutमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
जीवनसाथी भिसा लिने ’boutमा
जापान मा सँगै बस्ने को प्रवाह
जापानमा बस्नका लागि जीवनसाथी भिसा (निवासको स्थिति) प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रिया
जीवनसाथी भिसा अधिग्रहण प्रक्रियाहरूको लागि क्षेत्र
निर्दिष्ट वाणिज्य लेनदेन कानून मा आधारित प्रदर्शन
Copyright© 2021 अन्तर्राष्ट्रिय विवाह / चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, इत्यादि को लागी Spousal भिसा अधिग्रहण एजेन्सी केन्द्र।
सोधपुछ र अनुप्रयोगहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्